ब्लगिङ गर्दा स्व‌यम् आफू नै आफ्नो लेखको सम्पादक बन्न पाइन्छ : सन्तोष कुमार पौड्याल - MeroReport
ब्लगिङ गर्दा स्व‌यम् आफू नै आफ्नो लेखको सम्पादक बन्न पाइन्छ : सन्तोष कुमार पौड्याल
गुल्मीका सन्तोष कुमार पौड्याल हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा छन् । घुमफिर गर्न मनपराउने सन्तोषलाई समसामायिक राजनितीमा पनि रुचि छ । आफ्ना मनमा लागेका कुरालाई छोटो समयमा संसारभर पुर्याउन ब्लगिङ गर्ने गरेको बताउँने सन्तोषले आफ्नो ब्लगको नाम साउँखोला भने आफ्नै गाउँको खोलाको नामबाट जुराएका हुन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै सन्तोष कुमार पौड्यालसँग कुराकानी गरेकाछाै । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी:
सोसल मिडियामा म आफुलाई चिनाउन योग्य त्यस्तो विशेष केही काम गर्न सकेको छैन । तैपनि समसामयिक साहित्यिक र राजनैतिक कुराहरुमा बहस गर्न रुचाउने एक आम सचेत नेपाली युवाको रुपमा आफुलाई चिनाउन चाहन्छु ।
ब्लगिङ आफैमा एउटा स्वतन्त्र लेखन हो । आफ्ना लेख/रचना पत्रपत्रिकामा छपाउँदा त्यहाँ अर्को ब्यक्तिले सम्पादन गरेर आफ्नो लेख/रचनाको मुल आशय नै हराउने गरि बाहिर आउँछन् । तर ब्लगमा आफुलाई ठिक लागेको कुरा लेख्न र बुझाउन पाइन्छ । ब्लगिङ गर्दा स्व‌यम् आफू नै आफ्नो लेख/ रचनाको सम्पादक बन्न पाइन्छ त्यसैले पनि ब्लगिङ ।
मैले ब्लग बारे ५/६ बर्षअघि नै पत्रीकामार्फत थाहा पाएको थिएँ । तर कसरी ब्लग बनाउने त्यहाँ के लेख्ने भन्नेबारे केही जानकारी थिएन । ४ बर्षअघि ट्विटर दुनियाँमा छिरेपछी मैले ब्लगबारे धेरै जान्न पाएको हुँ । लेलिन बन्जाडेको 'मकै' भन्ने कथा उहाँको ब्लगमा पढेपछी म पनि अब ब्लगिङ गर्छु साहित्यसम्बन्धी केहि कुरा लेख्छु भनेर यूट्यूबमा कसरी ब्लग बनाउने ? कसरी डिजाइन गर्ने ? भन्ने भिडियोहरु हेरेर आफ्नो ब्लग बनाएको हुँ ।
खासमा मैले ब्लगिङ आफ्ना साहित्यिक रचना र बाल्यकालका संस्मरणहरुलाई लेखेर संग्रह गर्नको लागि गरिरहेको छु । अब बिस्तारै समसामयिक सामाजिक/राजनितीक बिषयमा पनि लेख्ने विचारमा छु ।
लेख्ने विषयवस्तुको जिम्मा आफ्नै मनलाई दिन्छु । जबर्जस्ती यो बिषयमा लेख्नैपर्छ भनेर चैं लेख्दैन ।
तपाईले साउँखोला बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ?
मेरो यो साउँखोला बाहेक अन्य कुनै ब्लग छैन ।
मेरो ब्लगसम्म पुगेर पढेर ब्लगमै प्रतिकृया दिने पाठकहरु अलि न्यून संख्यामै हुनुहुन्छ । तर पढेर फेसबुक, ट्विटरमार्फत प्रतिक्रिया दिने साथिहरु पनि हुनुहुन्छ। अहिले सम्म सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया नै दिनुभएको छ । केही साथीहरुले अब राजनितीक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा पनि लेख्ने गर सधैं कति साहित्यिका कुरा मात्र लेख्छौ भन्नुहुन्छ ।
आख्यान,गैर-आख्यान अध्ययन गर्ने, राजनैतिक, साहित्यिक मुद्दाहरुमा बहस गर्ने घुम्ने रुचि हो । मनै देखिको रुचि चैं ठेट नेपाली लोक गितहरुको संकलन गरेर तिनलाई रेकर्ड गर्ने हो । तर यो रुचि नभएर मेरो जिन्दगीको एउटा सपना जस्तो भएको छ अहिले ।
आफ्नो रुचिको बिषय साहित्यबाहेक अन्य बिषयलाई ब्लगमा समेट्न सकेको छैन ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला प्रसंगहरु पनि छन् कि ?
त्यस्तो उल्लेखनिय रमाइलो घटना त केही छैन । मैले ब्लगमा समेटेको म शीर्षकको कविता पढेर केही साथीहरुले मान्छेमा मपाईं चैं हुनुपर्ने रैछ तँमा जस्तै भनेर जिस्काएको प्रसंगहरु रमाइला थिए ।
ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता हो झैं लाग्छ मलाई पनि । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले प्रसारण/प्रकाशन गर्ने कुराहरु जस्तै उपयोगी कुराहरु ब्लगिङमार्फत पनि गर्न सकिने र धेरै ब्लगरले त्यसै गरिरहेकाले पनि म ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता हो भन्ने कुरामा सहमत छु ।